म जे बोल्छु त्यो गर्छु, गर्न नसक्ने कामको झुटा आश्वसान दिन्न : वडा अध्यक्ष ढकाल - Janawajnews.com | Online News Portal Nepal
म जे बोल्छु त्यो गर्छु, गर्न नसक्ने कामको झुटा आश्वसान दिन्न : वडा अध्यक्ष ढकाल
७ असार २०७९, मंगलवार ११:०७
कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ४ का पुननिर्वाचित वडा अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकालले स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ । रेडियो सिन्धुली आवाजसंगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा ८० प्रतिशत आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरेको र अवको पाँच वर्षे कार्यकालमा बाकी काम र प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्ने बताउनुभयो ।
२०७४ को निर्वाचनबाट वडा अध्यक्ष बनेपछि वडाबासिलाई दिएको सेवा सुविधाको मुल्यांकन गरेर नै जनताले फेरी आफ्नो अमुल्य मत दिएर वडा अध्यक्ष बनाएकाले अवको कार्यकाल अवधिमा पनि जनताको लागिनै तत्पर रहेर काम गर्ने ढकालको भनाई छ ।
निर्वाचित हुँदै गर्दा बनाएका योजना र पाच वर्षे कार्यकालमा आफुले गर्ने कामको बारेमा वडा अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकालसंग गरिएको अन्तरवार्ताः
तपाई दोस्रो पटक वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भईरहदा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ?
बिशेष गरि मेरो सानो बाल्यकालदेखि नै प्रा. बि. हाई स्कुल लेवल देखि नै साममाजिक कार्यमा सहभागि भै आएको व्यक्ति हुँ सामान्य तया मेरो अग्रजहरु राजनीतिमा लाग्नु भएको हुनाले २०४६ साल बाट नै म नेपाल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत भैसकेको थिए । र त्यहा बाट नै मैले सुरु गरेको हुँ । त्यसैले गर्दा म जनतामा जानु पर्छ र मैले गर्न सक्दाँ सामाजिक रुपलाई कसरी अगाडि बढाउने समाज समृद कसरी बनाउने र अहिले भै रहेको परिवर्तन लाई जनता सामु लगेर जो पिछडिएका वर्ग हुनुहुन्छ जो अलिकति राजनितिमा ज्ञान नभएको हुनुहुन्छ जो विकासमा हुनुहुन्न, जो शिक्षामा हुनुहुन्न, स्वास्थमा हुनुहुन्न, जो राज्यको पहुँचमा हुनुहुन्न उहाँहरुलाई उत्थान गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा म निरन्तर लागि रहेको छु । म यो भन्दा अगाडिको कार्यकाल पनि जनतासँग मैले सकेको जे सके मैले आफ्नो निजि पनि लगानि गरेर जनताको विकासमा हिडि रहेको व्यक्ति हुँ । म त अझ अप्डेट हुन चाहान्थें यो भन्दा माथिका पदहरुमा तर म भन्दा अझ सिनिएर साथिहरु भएको कारणले गर्दा एकचोटि वडामा नै बसेर फेरि काम गर्नुपर्छ भनि जिम्मेवारि दियो मैले जनता सामु गएर म फेरि तपाईहरुको सेवा गर्न आएको छु मैले भने । उहाँहरुले उत्साह पुर्वक मतदान गरेर जिताई दिनुभयो । उहाँहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहान्छु । म उहाँहरुको शासक हैन सेवक भएर काम गर्ने र उहाँहरुको चाहाना के छ त्यसलाई क्रमश पूरा गर्ने कुरामा म लागि पर्ने छु त्यो कुराले गर्दा म खुशि छु ।
तपाईले पहिलो निर्वाचनमा गर्नु भएका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
मैले पहिलो चरणमा जुन प्रतिबद्धता गरेको थिए, मैले के भनेको थिए भने हाम्रो साधन स्रोत लाई अप्डेट गरेर जनतामा हामीले जहाँ अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग बसेका छन् त्यहाँ एम्बुलेन्स नजाने बिजुलि बत्ति नजाने उहाँहरु अध्याँरो मुक्त नहुने समस्या थियो । मैले केन्द्रिय प्रशारण लाइनबाट नै हाम्रो वडा अहिले बिजुलिको समस्या बाट मुक्त भएको छ । मेरो प्रतिबद्धता पूराभएको छ । केहि व्यक्तिहरुमा बिजुलि पुगेपनि मिटर हाल्न उहाँहरुले निजि पैसाबाट नसक्नु भएको कारणले हामीले साउन १ गतेबाट लागुहुनेगरि आउने दशैं सम्ममा हाम्रो कुनैपनि वडाको कनै पनि घरहरु अध्याँरोमा बस्नुपर्ने छैन । हामी जसरी पनि अध्याँरो मुक्त बनाउछौं । उहाँहरु उज्याँलोमा बस्नुहुने छ । साथसाथै हाम्रो अब अलिकति लामिडाँडाका केहि भन्दा बहेक हाम्रो लगभग अपवादमा छुटपुट भन्दा बाहेक हामिले एम्बुलेन्स ट्याक्टर वा टेम्फु जाने बाटो बनाई सकेका छौ । त्यो लामिडाँडामा पनि प्रदेश सरकारबाट तत्कालै जगेडा कोष हालेर आजै मैले सिफारिस गरे । अब यो जेठ महिनामै हाम्रो सब कुनाकाप्चामा बाटो पुग्छ । अब बाटो लाई अप्डेट गर्ने स्तरोन्नति गर्ने ढल बनाउने पुलहाल्ने र त्यसलाई पिचसम्मको बाटो बनाउने कुरा राज्यको स्रोत साधनलाई पनि मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो वडामा म अएपछि हामीले सात कठ्ठा दश धुर जग्गा वडाको नाममा पास गरेका छौ । जसमध्ये हाम्रो दुई ठाउँमा सामुदायिक भवन बनेको छ र दुई ठाउँमा स्वास्थ भवन हामिले वडाकै बजेटबाट वडा कै जग्गामा बनाउन सफल भएका छौ । साथै हाम्रो केहि तट्बन्धन सिचाँइको बाटोमा हामी अरु वडाभन्दा अगाडि छौ । साथसाथै हामिले अलिकति अज्ञान रहेका या शिक्षाबाट बन्चित रहेका वा चेतना बाट बन्चित भएका निमुखा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनिलाई हामीले वडामा के के गर्नु पर्ने अथवा राज्यको पहँुचमा तपाइको भुमिका के के भन्ने विषयमा कुल बिकास सस्थाबाट वडामा बिभिन्न कार्यक्रमको अवसरमा त्यो वर्गलाई बोलाएर अलिकति हामीले चेतना फैलाउने कामपनि हामीले गरेका छौं । मैले जे बोल्छु त्यो गर्छु । जे गर्न सक्छु त्यो मात्र बोल्नुपर्ने हुँदा अन्य साथि भाईले जस्तो राजनितिक झुटा आस्वासन दिने काम न हिजो गरे न आज गर्छु । जे जे पोईन्टेट कुरा हरुमा ८० प्रतिशत मेरो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा पुरा गरे । अब बाकी बसेका काम र नयाँ कामहरुलाई पुरा गर्छाै ।
तपाइको नयाँ योजनाहरु के ल्याउनुभएको छ ?
हाम्रो भुगोलमा रहेको केराबारीमा प्रावि स्कुल छ । त्यो प्रावि स्कुलमा पुग्ने पहँुच पहल कदामी गर्दा गर्दै पनि अपुरो भएको छ । अहिले मेरो पहलमा ट्वाईलेट बाथरुम बनिसकेको छ । त्यो स्कुललाई भौतिक रुपमा पनि सम्पन्न गर्ने । विपन्न वर्ग र पिछडिएको वर्ग, जनजाति विद्यार्थीहरु पढ्ने भएकोले पुर्वाधार विकास गर्ने योजना छ । त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटोको व्यवस्था गर्छाै । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य भवनलाई अप्डेट गराउछौ । बाह्रै महिना एम्बुलेन्स सेवा सुचारु राख्छौ । त्यस्तै खानेपानीलाई एक घर एक धारा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौ ? शुद्ध पानी कसरी पिलाउन सक्छौ ? भन्ने मुख्य योजना हो ।
पहिलो योजनाहरु पुरा नभएर नै हो फेरी दोहोरीनुभएको ?
होईन राजनितिक कुरामा नेतृत्व लिईरहदा यो दोहोरिने भन्ने कुरा होईन चै पार्टिले नै अप्डेट गराउने कुरा हो । मेरो उद्धेश्य चाहाना र साथि हरुको पनि चाहाना भएकाले यो भएको पनि हो । अब म भन्दा सिनिएर व्यक्तित्व पार्टिमा भएकाले मलाई फेरी जिम्मेवारी दिएको हो । बिकासको क्रमको अन्त्य कहिले पनि हुदैन । त्यसैले पार्टिले जिम्मेवारी दिएको हुनाले म अगाडी बढेको हुँ ।
विद्युतीकरणमा अब कुनैपनि घर बन्चित हुनुपर्दैन । खानेपानीको लागि पनि एक घर एक धाराको गुरु योजना अघि सारेका छौ । पिछडिएको महिलाहरुलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा सबै भन्दा धेरै कार्यक्रमा महिला सहभागिता गराएर काम गरेका छौ । हामीले महिला दिदिबहिनीको चेतना कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा हाम्रो टिम अग्रसर हुनेछ ।
कमलामाई नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको वडा नम्बर ४ भएको र महाभारत, शिवालेक र चुरे पर्नुका साथै मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गको परिवारको बसोवास रहेको र धार्मिक, पर्यटन, कृषि क्षेत्र लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्दै जानुपर्ने भएकाले वडामा आएको बजेटले सबै विकासात्मक काम गर्न सकिदैन । ठ्याक्कै वडामा आउने बजेटले जनताको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरेर काममा सहज बनाउने वडाको जिम्मेवारी हो । ठुला ठुला बजेटको योजनाहरु नगर, प्रदेश संग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । वडामा आउने बजेट एकदमै सानो हुन्छ त्यसलाई सबै क्षेत्रमा पु¥यानुपर्ने भएकाले उहाँहरुले चाहे जस्तो नहुन सक्छ । बजेट अनुसार कुन ढंगमा जाने भन्ने छलफल गरेर भएको बजेटलाई कहीँ कतै चुहावट हुन नदिई काम गर्नेछु ।
तपाईले युवा तथा बेरोजगारहरुलाई गाँउघरमै स्वरोजगार दिने बताउनुभएको थियो यसका लागि के—के काम गर्नुहुन्छ ?
म जे गर्छु त्यो भन्छु, जे गर्न सकिदैन त्यसको झुटा आश्वासन हिजो पनि दिईन आज पनि दिन्न भोली पनि दिन्न । हामीले एउटा योजना बनाएर उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य त नगरसंग समन्वय गरेर गरिराखेका छौ । राज्यको पालिसि, नगरको पोलिसि जे छ त्यो अनुसार वडाले सक्ने काम गर्छाै । जुन कामले युवाहरुलाई रोजगारको अवसर मिल्नेछ ।
तपाईका वडाबासीले वडाबाट दिईने सेवा र सुविधाको बारेमा कतिको बुझेका छन् ?
हाम्रो वडामा आउने वडा बासीको लागि तल हामीले एउटा लेखन्दास राखेका छौ । अलि क्षमता भएका संग समान्य शुल्क लिने र विपन्नहरुलाई निशुल्क रुपमा केका लागि आको भन्ने बारे बुझेर उहाँहरुले कस्तो खालको सेवा लिन आउनुभएको हो भनेर लेखन्दासले बुझिदिने हुँदा उहाँहरुलाई समस्या गराएका छैनौ ।
नागरिक बडापत्र भनेको वडाबासीलाई थाहा छ ?
नागरिक बडा पत्र भनेको त हाम्रो बाहिर अप्डेट नै छ । त्यै पनि राजस्व तिर्नुपर्ने छ उहाँहरु संग छैन भने मैले मेरो व्यक्तिगत दिएर पनि सहयोग गरेको छु ।
उहाँहरुले उत्साह पुर्वक मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुभएर आफ्नो बाहुल्यता बाट मलाई र मेरा साथिहरुलाई निर्वाचित गराईदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यबाद भन्दै उहाँहरुको मतदानलाई सासक हैन सेवक बनेर काम गर्नेछु । साथै यो वडालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे हामी उहाँहरुको आत्माविश्वासलाई घट्न नदिई कटिबद्ध रुपमा काम गर्छाै ।
मरिण गाउँपालिका वडा नम्बर २ का कृषकको लागि कृषि सामाग्री वितरण
गठबन्धन बाहेकका प्रतिगमनकारी दललाई जिताउने दुश्साहस नगर्न माझिको आग्रह (चुनावी कार्यक्रम)
संकटको घडिमा नागरिक बचाउनु मेरो प्रमुख दायित्व : नगर प्रमुख खत्री
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाद्धारा वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण
हरिहरपुरगढीमा निःशुल्क आँखा शिविर तथा अप्रेशन सम्पन्न